Apply for jobs in Dubai – Strategies and Research for Career in UAE – Jobs – Career – Travel
Codso shaqooyinka Dubai - Istaraatiijiyadda iyo Cilmi-baarista loogu talagalay Shaqada ee UAE
Fursadaha Xirfadaha ee Hindida ee ku nool UAE
Shaqooyinka magaalada Dubai Codso shaqo
Shaqooyinka Dubai Ku codso shaqo guud ahaan guud ahaan ka shaqeeya dibadda UAE. Wakhtiyada la raadinayo shaqooyinka bannaan Dubai iyo Bariga Dhexe horeba waa la beddelay. Inta badan qeybta sanadaha ee shaqo raadinta cusub oo jaamacadda ka baxsan. Waxaadna ku sii ahaataa tusaale ahaan shaqooyinka baridda ee Dubai ama shaqooyinkeeda Dubai ilaa hawlgabku waa hubaal. Si loo helo boosas cusub oo ku yaal Dubai Waxaan rajeyneynaa in adduunyada maanta jirta inaad ku heli doontid shaqo cusub.
Tusaale ahaan bulshada guud ee shaqo ka raadinaya Dubai shirkadeena ayaa isku dayaya inay ka caawiyaan sidii ay shaqooyin u heli lahaayeen. Badiyaa Xirfadda Dubai kuwa doonaya, sababtaas awgeed, waxay u baahan yihiin inay leeyihiin waayo-aragnimo shaqo oo wanaagsan isla markaana la-qabsashada degdegga ah. Si kale loogu dhigo, waxay u baahan yihiin inay awoodaan inay helaan shaqooyin cusub iyo kuwii ugu dambeeyayba Dubai 2019 halkaasoo ay ka heli karaan fursado shaqo oo cusub.
Sidaas awgeed shirkadeenna ayaa sidaas awgeed ka caawinta inuu xirfad ku helo Dubai. Si kale haddii loo dhigo, waad ka eegi kartaa baaristayada iyo istiraatiijiyaddeena shaqooyinka Gulf wadamada. Shirkadda Dubai City waxay maamushaa wax kasta oo loo tixgeliyo shaqo raadintaada. La siiyay Dhamaan qodobbadaas oo dhan way dhacayaan iyagoo shaqo ka raadinaya Dubai.
Laakiin mustaqbalka fog, xirfad-doon kasta wuxuu u baahan yahay inuu yeesho horumar wanaagsan iyo horumar horumar iyo istiraatiijiyad meesha taal. Xaqiiqdi, Maqaalkayaga, waxaad ku samayn doontaa horumar Isu Imaaraatka, Iyo dabcan, aqoonta ugu fiican oo waad heli doontaa fursadaha shaqo ee Dubai. Horumarinta horumarka iyo cilmi baaris qotodheer, falanqaynta ugu dambeysa, waa ikhtiyaarka ugu wanaagsan ee xirfadda iyo suuqa shaqada ee UAE.
Maalmo cusub oo lagu helo shaqo ee Dubai
Inkastoo tani run tahay shaqo ka raadso Dubai ma aha mid fudud in 2019. Aad ayey muhiim u tahay in la ogaado laakiin badi hababka caadiga ah iyo xeeladaha furitaanka shaqada ee Dubai wuu fashilmay. Marka la eego qodobbadaas, sii wad oo hubso caan Goobaha shaqo ee Dubai. Marka la eego siyaabihii hore, shaqooyinka hadda ee Imaaraadka waxay bilaabeen in ay uumi baxaan si caan ah. Ma jirto waqti dheeri ah oo la helo shaqooyinka laga heli karo gudaha Dubai dhalasho kasta kuwaas oo guud ahaan raadinaya shaqaalaynta xulashada wargeyska. Ama xitaa raadi xayeysiis maalmeed si aad u ogaato xirfadahooda. Ilaa wakhtigan xaadirka ah dalabaadka shaqo ee Dubai 98% hadda way internetka yihiin. Sababtan awgeed, badankeena International shaqaaleyaal xirfadlayaal ah noqdaan kuwo cusub oo cusub oo loola tacaalo istraatijiyad cusub si ay ugu qanciyaan shaqadooda iyo xirfadahooda hore.
Ujeedada loogu talagalay kaa caawinaya shaqo ka raadso UAE. Shirkadeena waxay dhalinaysaa talooyinka fursadaha raadinta shaqo ee caanka ah. Tani waa sida dadka kale ee u ugaadhsanaya xirfadaha shaqo ka raadinta Imaaraadka. Siyaabo cusub oo shaqo looga helo Dubai ayaa horeba ugu soo gaadhay Emirates. Oo kanu waa a shaqo raadinta moobaylka ee Dubai. Hadda waxaad ka raadin kartaa shaqadaada riyada adigoon isbarbardhigin.
Sidee loo helaa shaqooyinka bannaan ee Dubai iyo inta ay qaadan doonto?
Iyadoo ujeedadan, shirkaddayadu waxay awood u leedahay inay ku caawiso helitaanka fursado shaqo ee Dubai. Tusaale ahaan nafta Dubai in ka badan 300,000 ilaa 500,000 kormeerayaasha imanaya ee imanaya Imaaraadka. Si kale loo dhigo, dhammaantood waxay rabaan Shaqooyin cusub oo Dubai ka jira. Laakiin taasi waa in la yiraahdo: qof kasta oo ajnabi ah ma heli doono a Xirfadda Dubai. Waxa ugu horreeya ee aad xusuusato raadinta shaqooyinka online ee Dubai 2019 waxay qaadan doontaa wakhti. Sababtan awgeed, waxaad u baahan tahay inaad CV-gaaga u dirto madax-yare iyo diiwaan-galintaada oo aad u badan goobaha shaqada ee UAE. Shirkadda Dubai City tan iyo 2009 waxay fulineysaa cilmi baaris ay la sameysay maareeyayaasha HR. Xaaladahaasna, caddaynta ugu qasabka ah ee aan helnay waa ka caawinta shaqo doonka in lagu meeleeyo Dubai.
Xaaladaas, waxaad u baahan doontaa inaad ku qaadato wax ka badan bilooyin 3 kaliya si aad u dirto CV oo aad naftaada u gasho halkaas iyo heli ka dareenka loo-shaqeeyayaasha waxay qaadan doontaa waqti iyo illaa biloowga 8. Dhanka togan, marwalba waad awoodaa qabashada xarunta dhexe ee shaqada ama xitaa shaqooyinka tafaariiqda ee Dubai waqtiga aad raadineyso a shaqo riyo ah dalka UAE.
Cilmi-baarista Shaqooyinka ee Dubai
Sida xaqiiqda ah, shahaadada Bachelors ama Masters ayaa loo baahan yahay inta badan shaqooyinka UAE. Intaas waxaa dheer, badankood shaqo doonka u baahan tahay ugu yaraan 2-5 sano oo waayo-aragnimo ah xagga adeegga macaamiisha, ama 2-3 sano macaamil-adeeg khibrad leh. Iyo sannadihii 1-3 ee waayo-aragnimada Bariga Dhexe-dhinaca. Si lamid ah muhiimada shahaadooyinkaaga waxaad ubaahantahay inaad masuul ahaatid iyo qofka aragga. Qodob kale oo muhiim ah gudaha mustaqbalkiisa waxaa loogu talagalay kormeerka iyo fulinta. Dhanka kale, waa inaad sidoo kale fiirisaa shirkadaha kireysta. Xarunta Shaqaalaynta ee Careerjet ee Dubai iyo Shirkadda ugu sarreysa shirkadda Gulf Expat kireysiga. Runtii aad ayay muhiim u tahay inaad dalbato CV-gaaga. Dhammaan macnihiisu, marka aynu falanqeyno xirfad shaqsiyeedka gaarka ah waxaanu ka baaraandegi doonaa mashruuc kasta oo ka bilaabanaya warbixinta. Iyo si aad u tilmaanto waxa aad u baahan tahay si aad u heesato astaantaada si aad u geliso CV oo aad uga hesho shaqo Bariga Dhexe.
Waxa ugu horreeya ee la xasuusto waajibaadka muhiimka ah
Ka qaad mas'uuliyadahaaga aad u baahan tahay si aad u hesho shaqo:
Guud ahaan, kartida si loo maareeyo mashaariicda Shirkadaha degaanka Dubai.
Xaqiiqdii, waa inaad awood u leedahay inaad si madax banaan uga shaqeyso Imaaraadka dhexdiisa.
Tusaale ahaan, waxaad ubaahantahay inaad dammaanad qaado masuuliyadaada iyo kaqeyb qaadashada sare si aad shaqada u qabato. Had iyo jeer ku nuuxnuuxsada lahaanshaha meeleynta xitaa haddii ay adag tahay. Isgaarsiinta telefoonka gacanta oo la taaban karo xirfadaha Ingiriisiga iyo Carabiga.
Faahfaahin, waa inaad noqotaa mid firfircoon oo aad dadaal u gashid mar kasta.
Dhab ahaantii, ku tilmaan waajibaadka suuqyada muhiimka ah ganacsatada macaamiisha hadda jirta. Caqli badan noqo si loo xaliyo dhibaatooyinka si dhakhso ah mustaqbalka fog marka la eego ku noolaashaha Imaaraatka.
Shahaadooyinka / Shuruudaha Xirfadaha Fulinta ee UAE:
Guud ahaan aqoon aad u wanaagsan oo ku saabsan qaabab ganacsi oo kaladuwan oo kala duwan oo Dubai ah.
Sida lagu xusay intiisa badan shirkadaha raadinaya waayo-aragnimo ku saabsan suuq-geynta onlineka iyo joogitaanka internetka.
Xirfadaha xoogga leh ee qorista Ingiriisku waa shuruud iyo dhisida warbixin adag oo macaamiil ah waa waajib.
Shaqooyinka Imaaraadku way u baahan yihiin waayo-aragnimo deegaan dhaqamo badan leh, in laga bilaabo, Europe, USA, Canada, Aasiya.
Isla waqtigaas sidoo kale waxaad u baahan tahay inaad yeelato xirfado aad u fiican oo falanqeyn ah iyo waayo-aragnimo iib iib oo xoog leh.
Ilaa wakhtigan xaadirka ah, mid kasta Imaaraadka Carabta waa inay noqdaan faahfaahin faahfaahsan, ciyaaryahan ciyaaryahan, iyo muujiya xirfadaha horumarinta sare.
Aakhirkii Iyaga oo leh ogaansho xoogan dhamaan qaybaha shaqada iyo khibrada leh eek u saabsan khibradaha ganacsiga guriga.
Fahminta ganacsi dheeri ah oo ka socda UAE iyo khibradaha maamulka ee qaar ka mid ah maareynta shaqaalaha da'da yar ee shirkadaha Bariga Dhexe.
Mushaarka baaritaanka iyo faahfaahinta shirkadda Dubai ka hor wareysi
Meequu shaqaaleeyaa marka uu ka shaqeynayo shirkadaha UAE? Waa in la xasuustaa in ka badan shirkadaha 170 ee UAE yihiin muuqata on glassdoor.com. Qodob kale oo muhiim ah ee cilmi-baaristaada waa inuu ahaado Mushaharka Shaqooyinka Dubai. Dhinaca dhinaca wanaagsan, waxaad ku hubin kartaa ka hor intaadan xitaa aadin wareysiga. Tusaale ahaan, samee doorashada xilka shaqada oo aad garatid lacagta daqliga ah ee aad xubin ka tahay shaqaalaha ama wakiilka maamulka sare ayaa kaa caawin kara goob shaqo ee gaarka ah ee Dubai.
Ilaa iyo hadda, shirkadda Glassdoor Magaalada Dubay oo dhammaystira tirakoobka mushaharka. Isku soo wada duuboo, dib u eegistoodu waxay ku saleysan tahay 980 Shirkadaha Magaalada Dubai. Qeybta ugu badan, shirkaddu waxay sameysay warbixinno ku saabsan mushaaraadka UAE. Sida kor lagu muujiyey, marka la soo koobo, warbixinta gunnada ee ay bixiso shirkad kastaa. Iyo gudaha falanqaynta ugu dambeysa faahfaahinta mushaharka ayaa sidoo kale lagu daray. Xitaa waxay kala qaybiyaan warbixinada guud ahaan saacaddiiba shaqaalaha Dubai iyo shirkadaha. Si kastaba ha noqotee, dib-u-fiirinta waxaa lagu soo gudbin karaa qarsoon ama shaqaalaha. Ama yaa u shaqeeya shirkaddaas gaarka ah ee ku taal Dubai. Marka marka a qoraaga Dubai ayaa ku weydiin doona inta lagu jiro waraysiga intaad raadineyso inaad hesho? Isla markiiba cilmi-baaristaada "Winddoor", waxaad ogaan doontaa lambarka aad ku qiyaasi kartid oo aad siiso iyaga oo aan lahayn codsi mushahar khalad ah.
Glassdoor - hubi inta mushaharka shaqada ee aad ka filan karto Dubai
Sidaas awgeed Shaqooyinka dibada ee Dubai 2019 ayaa jira oo ku sugaya adiga. Laakiin tusaale ahaan, shaqooyinka baabuurta ee Dubai ama xitaa shaqooyinka ilkaha ee Dubai way ku sugayaan. Waxba kuma jabno meesha aad ku codsaneyso waa inaad ahaataa 100% oo la diyaariyey hal daqiiqo oo waji ah waji-waji ah. Dhammaan mid deg deg ah waxaad u baahan tahay inaad si qoto dheer u eegto Shaqooyinka Dubai. Aragtida shirkad cilmi baaris ah, ujeedooyin iyo isu-geyn fursado shaqo in shirkaddu bixiso. Dhanka kale, cilmi baarista hadafyada shaqada aad loo jecel yahay waa shaqooyinka banaan ee IT-ga ee ka jira Dubai. Sababtoo ah fursadaha shaqo ee 7 Emirates had iyo jeer waa Dubai waxay albaabbada u furi doontaa khubaro cusub Hindiya.
Falanqaynta ugu dambaysa ee fursadaha shaqo ee Dubai, waa inaad inaad dookha u jeediso shaqo-bixiyeyaasha. Diyaarso faahfaahintaada si qumman sida ugu dheer goobaha shaqo ee gulf isagoo furitaanka shaqada ka furanaya Dubai. Si kastaba ha noqotee, labadaba, labadaba Mushaharka Shaqooyinka Dubai iyo goobjooge kale dib u eegista shaqo doonka. Sidaas awgeed go'aan ka gaadho shirkad noocaas ah duruufahaas aad eegto aad rabto inaad u dhawaato. Iyo gunaanadkii ugu dambeeyay, ku garaaceen si ay u muujiyaan xirfadaha ganacsi sida sirdoonka. Gaar ahaan iyo xaqiiq ahaan waaxda aqoonta oo ay weheliso khibrad ku saabsan qaybinta shirkadooda. Wadajir kalsooni la taaban karo Meesha ay tahay inay kugu daraan mustaqbalka.
Istaraatiijiyooyinka Shaqooyinka ee Dubai
Shabakad si aad shaqo uga hesho Dubai 2019 iyo Imaaraadka Carabta
Waxa ugu horreeya ee la xasuusto waa in kabadan nus ka mid ah boosaska shaqada waligood looma xayeysiinayo websaydhyada shaqaalaynta ee Dubai. Isla mar ahaantaana, tan waxaa badanaa la siiyaa tusaale ahaan suuqa shaqada ee qarsoon. In kasta oo ay taasi run noqon karto in la helo kuwan shaqooyinku waxay bixiyaan wax ka badan bogagga Top Linkedin ee UAE. Sidan oo kale xirfadlayaasha waayeelka ah ee shirkadayadu waxay leeyihiin lugta albaabka. Adeeggayaga shabakaduhu way ka duwan yihiin goobaha shaqo ee kale ee Dubai.
Intaa waxaa dheer, sida xaqiiqda ah, Shirkadda Dubai City Company ayaa la abuuray nidaam aad ku mari karto wado dheer isla markaana aad la xiriirto maamulayaasha HR si aad uhesho fursadaha shaqo ee Dubai City. Ujeedada laga caawinayo. Xitaa haddii qofna kuu garanaynin jihooyinka waxaad noqon doontaa si aad ula xiriirto maareeyayaasha HR, shaqaalaha sare, iyo maamuleyaasha Dubai. Si kale loogu dhigo, inteeda badan Dubai ayaa horumarisay Hay'adaha shaqa qorista waxay khibrad u leeyihiin furitaanka shaqada aaggaaga khibradda leh. Tusaale ahaan, waxaad kula xiriiri kartaa Agaasimaha HR ee Hays.ae waxaana jira fursad aad u weyn oo uu ku ogaan karo qof karti u leh Waxay kaa caawineysaa in aad shaqo raadisid.
Dadka ajnebiga ah ee caalamiga ah waxay sidoo kale dalban karaan shaqo ku yaal Dubai
Waayo, shaqooyinka beeraha, isku xirnaanta ayaa lagu wada qaban karaa Linkedin. Dabcan, waxay noqon kartaa qof ahaan iyo ilo kale oo internetka ah. Laakiin sababtan awgeed, waad ku biiri kartaa annaga ururada shirkadaha xirfadaha leh nidaamka iyo waxaad kula xiriirin kartaa in ka badan shaqaale qorayaasha 2,000 ee Magaalada Dubai. Tusaalaha kor ku xusan ujeedadeena ayaa ah inaan kugu xiriirino xirfadlayaasha shaqa qorista. Guud ahaan hadalka Wadanka Isutagga Imaraadka carabta waxaan haysanaa Boqorkeena, Kadib waxaan la shaqeynaa Qatar iyo Sacuudi Carabiya halkaas oo aad ka heli karto shaqooyinka shaqo qorista ee Dubai 2019 gudahaaga gudaheeda.
Waqtiga fog, qalabyo badan oo online ah ayaa sidoo kale jira si ay kuu caawiyaan ka hesha xirfad sare ee Dubai 2019 ee UAE. Gabagabadii, Xariirka warbaahinta bulshada sida 'LinkedIn' wuxuu ka caawiyaa qarashyada caalamiga ah inay ku dalbadaan shaqooyinka Dubai. Waqti ka waqti shaqaaleysiiyayaal ka socda Linkedin kuu oggolaanayaa inaad kula xiriirto iyaga laakiin keliya qaab xirfad leh sida Emirates Airlines.
Inta ugu badan, iskuday inaad la xiriirto shaqaaleeyeyaal qoro oo meeleeyay jagada shaqadda bannaanka. Si kasta ha noqotee, qor nidaamkeena iyo isku xirnaanta sayga si aan u gaarno Shaqooyinka Dubai ee ajaaniibta iyo furitaanka shaqooyinka bannaan ee Bariga Dhexe. Si loo soo koobo waxaad sidoo kale la kulmi kartaa takhasusle kale khabiir shaqaale iyada oo loo marayo shabakadaha kale ee warbaahinta bulshada sida Shabakada Dubai City Facebook or Twitter.
Kala xiriiri Maamulayaal / Tababarayaal / Hagayaasha HR
Whatsapp Group si loo helo shaqo Dubai
Barta inta badan la iska iloobo waa goobaha shaqooyinka laga helo. Si loo tilmaamo dhinaca togan ee shirkadahaan waxaad ka heli kartaa. Shaqada martigelinta ee Dubai, guud ahaan dowladaha Shaqaalaha Dawladda ee Dubai oo bannaanbaxaya guud ahaanba shaqooyinka saacadaha qaarkood ee Dubai haddii aad horeba ku salaysay Imaaraadka. Si kastaba ha noqotee dhinaca xun ee aad ka timid India oo raadinaya shaqooyinka Dubai ee loogu talagalay Hindiya way adag tahay. In kasta oo aad hadda uun qalin jabisay ama aadan lahayn waayo-aragnimo shaqo oo aad shaqo uga raadineyso Dubai shaqooyin cusub. Guud ahaan ka hadalka mustaqbalka fog ee raadintaada shaqada Dubai way kala tagi doontaa. Sida kor ku xusan Shirkadda Magaalada Dubai si xirfad leh u aasaaso dhowr shaqooyin oo leh MBA. Kooxdayadu waxay qaadatay wax kasta oo la tixgeliyey waxayna falanqaynta ugu dambeysa bilaabeen caawinta dadka ajnabiga ah.
Intaas waxaa sii dheer, meelaha ugu caansan ee mustaqbalka shaqada waa shaqooyinka bangi ee ka jira Dubai sida Emirates NBD iyo HSBC Bank ee UAE. Ma aha in la xuso shaqooyinka qareennada iyo shaqooyinka sharciga ee ka jira Dubai. Iyo shirkadda Rak Logistics halkaasoo saadka ugu sarreeya Shirkadaha ku saleysan Dubai oo bixiya shaqooyinka saadka ee Dubai. Marka la eego qodobbadaani shaqo-dooneyaasha caalamiga ah ee ay weheliyaan khubarada UAE ee u diraya CV / resume to wakiilada qorista ee UAE.
Ku biir kooxda WhatsApp ee Shaqooyinka UAE
WhatsApp Rasuulka aan dib u dhicin kaa caawiya inaad hesho Shaqada Dubai. Daqiiqad ayaad lahadli kartaa wakiilada shaqaaleynta. Ama xitaa ku dhaji CV-gaaga dhowr gudahooda qorayaasha ee Dubai Kooxda WhatsApp. Mararka qaar maamulayaasha HR iyo shaqaaleysiinta shaqaaleysiinta ee Dubai iyo Abu Dhabi boostada shaqooyinka soo gelista ee Dubai si aad ugu boodi karto shaqooyinkaas. Ilaa waqtigan xaadirka ah, waxaan ku hareereysanahay 10 Whatsapp mobile kooxaha Dubai. Markaa aynu si dhakhso ah u socono ilaa waqtigan xaadirka ah ee shaqo doonayaasha 50,000 horeba u heleen shaqooyin caalami ah oo ka socda Dubai 2019 oo kaliya adigoo isticmaalaya Bariga Dhexe Kooxda WhatsApp.
Shirkadda Dubai City oo rajeyneysa inaad sidoo kale ku heli doonto riyo ku shaqeysa Imaaraadka Carabta. Ku martiqaad inaad ku biirto kooxda WhatsApp ee Dubai. Dhinaca kale, waa 100% lacag la'aan ah mana ubaahnid inaad wax badan sameyso dirista resume iyo Inaad ka heshid shaqooyinka ugu fiican ee Dubai. Dhamaadka hal riix ayaa waxbadan iska badali kara shaqadaada Dubia ayaa socota.
Ku xiro Hiring Hiring Recruiters on WhatsApp Group
Mustaqbalka raadinta xirfadlaha waxaa ka mid ah resume video ah
Hay'adaha shaqada ee Dubai, gunaanadka, raadinta musharixiinta cajiibka ah. Si loo bilaabo, warbixinta shirkadaha caalamiga ah ee muujinaya in tan iyo 2015. Ilaa waqtigan la joogo, 75% aragtida internetka ayaa ku jirtay qaab dhismeedka fiidiyowga. Daqiiqad fiidiyowga CV wuxuu ku kici doonaa 85% by 2020 Expo Magaalada Dubai ee Fasaxyada Dowladda. Maareynta fikirka hore ee shirkadda waa isbeddello dib-u-bilaabis ballaaran Imaaraadka Imaaraadka Carabta.
Dib-u-dhiska Youtube Resume oo si waxtar leh loo wadaagi karo warbaahinta bulshada. Si laga bilaabo, shaqo raadinta video youtube ayaa dib u bilaabeysa abuurista fiidiyowga sida caadiga ah waxay qaadataa qiyaastii 30 illaa 90 ilbiriqsi dherer. Qodob kale oo muhiim ah oo aad u baahan tahay inaad raacdo waxaa lagu muujiyey naftaada inaad tahay qof saameyn ku leh for a shaqo bixiye toos ah. Waxaad u baahan tahay inaad sidoo kale muujiso sida aad uga caawin karto shirkadda ku haboon aragtida. Intaa waxaa dheer, ka caawi inay ku guulaystaan ​​koritaanka ganacsiga iyo si kale haddii loo dhigo ku guuleysiga ganacsiga.
Dib-u-soo-ceshiga muuqaalka shaqo raadinta ee UAE
Maaha in la xuso in badiyaa shaqo doonku aysan garaneyn halka laga bilaabayo. Haddii aad raadinayso Shaqooyinka Dubai loogu talagalay dadka Mareykanka ah waa inaad eegtaa Jobma.com. Sidoo kale muhiim u ah in ay tahay in la bilaabo helitaanka madaxda sare ee madaxda iyo shaqaaleynta maamulayaasha UAE. In kasta oo ay taasi run tahay weydiinta maamulayaasha HR ee gudaha shirkadda iyo la taliyayaasha shaqaaleynta dibada ah ee guud ayaa kaa caawin doona in lagu meeleeyo. Markay sidaa tahay, la soco qaybta dhaqanka shirkada isla markaana sii filim hordhac ah loo shaqeeyahaaga mustaqbalka.
Mararka qaar shaqooyinka mararka qaar ee wadamada Khaliijka ah waxay u dhacaan si deg deg ah. Gaar ahaan marka la-taliyeyaasha shaqo-qorayaasha booqashada dib u soo noqoshada Youtube. Intaas waxaa sii dheer shaqaaleynta shirkadaha u yeedhista musharaxiinta oo ka wada hadla jagooyinka hadda jira Si ula kac ah buug wareysi ku socdo Iyaga iyo wakhti ka dib, xubnaha shaqaalaha ee hadda jira waxay bixiyaan a Dubai waa shaqo bannaan. Dubai waa furan tahay Markhaatiyada ayaa si weyn loogu qaddariyo khibradahooda shaqo ee loo shaqeeyaha.
Fiidiyowgu wali waa dhow yahay ikhtiyaarka cusub ee ugaadhsiga shaqada Magaalada Dubai. Laakiin mustaqbalka fog, waxaa loo gudbin karaa qaabab kale oo loogu raadinayo shaqo sidoo kale. Halkii laga isticmaali lahaa qaab dhismeedka qaab nololeed dhaadheer, sharraxaadda ayaa loo adeegsadaa filimmo Youtube ah. Soo koobid, bixi aragti dhab ah oo ku saabsan mas'uuliyadaha shaqo ee aad maareyn jirtey waagii hore. Sida ka muuqata codsadeyaal tayo sare iyo waaya aragnimo leh oo ka socota deegaanka Suuqa suuqa shaqada ee Dubai ayaa aad u soo jiitay hay'adda caalamiga ah ee Imaaraadka Carabta.
Marka la eego qodobbadaas, samaynta xitaa fududeynta fiidiyowga Youtube-ka oo sahlan. Xaqiiqdii waxay u badan tahay inay caawin doonaan iyaga Samee go'aanka saxda ah kuna adkeyso jagada Waaxda Bangiga. Qaar ka mid ah shaqaalaynta qorista ayaa durba aqbalay caannimada filimaanta resumeynta xayeysiinta ah. Falanqaynta ugu dambeysa, araajida wada sheekaysiga ee horay loo sii qorsheeyay ayaa sidoo kale soo bandhigaya dood ku saabsan su aalaha iyo jawaabta a habka loo helo wareysiyo rasmi ah. Si loo soo koobo wada-hadallada fool-ka-fool-foolka ah, muddada dheer, waxay kordhinaysaa codsadayaasha kaqaybqaadashada bulshada.
U gudbinta shaqooyinka wanaagsan ee Dubai
Sababtan darteed, dhab ahaantii badan shaqaaleyaal xirfadlayaal ah Waxay isku dayeen goobaha shaqada ugu fiican ee Dubai iyo kuwo kale portals shaqada internetka. Intaa waxaa dheer, in si kale loo dhigo, wargaysyadu wax jawaab ah kama helin. In nuurka ah darawalnimada safarka ee Dubai. Si kastaba ha noqotee, gudbinta ayaa si isdaba joog ah kuu heli kartaa boos bannaan oo ah Dubai. Laakiin dhab ahaan, shaqooyinka intooda badani waxay ka yimaadaan shakhsiyaadka aad ogyihiin dad aan toos ahayn. Dhinaca kale, hannaanka geeddi-socodka ayaa laga yaabaa inuu kuugu dhiirigeliyo dhiirigelinta martiqaadka. Iyada oo gargaar loo diro dalbashada a Shaqooyinka shirkadda Dubai booska wuxuu ku siinayaa gees gees xoog leh wada jir kalsooni. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxaad kuheli kartaa guri kasta oo Dubai ku yaal adigoon lahayn wax warsaxaafadeed ah raadinta shaqo banaan oo gaar ah oo ka jirta UAE.
Marka la eego qodobbada, badankooda dadka shaqo doonka ah waxay rabaan inay shaqooyin ka helaan Imaaraadka. Dhab ahaan, qof kasta oo doonaya inuu jecel yahay inuu la shaqeeyo shirkadaha wanaagsan. Halka ay ku isticmaali karaan waxbarasho u gaar ah iyo xaqiiqda waxay isticmaalaan xirfad tababar iyo khibrad ay la socdaan xirfadaha isgaarsiinta. Muhiim u ah in la gaaro gudbinta weli waa ilaha ugu wanaagsan shaqaale doonaya Dubai. Duruufahaas oo kale si aad ugu isticmaasho tixraacyo shaqooyin fiican oo ku sugan Dubai waxaad weli u baahan tahay inaad lahaato khibrad wanaagsan. Xaqiiqdii, waxaad noqon kartaa musharax aad u xiiseeya. Laakiin si aad u bilaawdo shaqada waxaad ubaahantahay inaad heysato jawi taageero ama reer ama saaxiibo fiican oo boos fiican haysta.
Muhiim u ah in la ogaado in badi loo shaqeeyayaashu ay dhiirigeliyaan shaqaalaha. Guud ahaan, haddii ay soo gudbiyaan guuleyste guuleystay shirkadooda. Waqtiga dambe ama ka dib haddii ay kuu shaqaaleynayaan waa xaalad guuleysi leh loo shaqeeyaha iyo shaqo raadiyaha. Muddada dheer, adiga helitaanka meelayn shaqo ee Dubai gudaha Automotive suuqyada magaalada Emirates. Xidhiidhkiina wuxuu helayaa abaalmarin abaal-marin ah oo loogu talagalay fulinta saamilaha ama xitaa shaqaale sare.
Shaqada xaafadaha 2019 ee Boostada iyo Xirfadaha Shaqooyinka
Guddiyada shaqadu waxay ku sii jeedaan dhaqan ahaan raadso shaqooyinka maxaliga ah ee Dubai. Shabakadaha shaqooyinka ilaa ilaa hadda shaqooyinka xayeysiinta ee Dubai hadda. Sida iska cad si kastaba ha ahaatee, dib u dhigista shaqooyinka cusub ee banaanbaxyada iyo ganacsiga adeegyada fursadaha shaqaalaynta meelaynta. Isla mar ahaantaana, qaar ka mid ah guddiyada shaqada laga yaabo inuu weli jiro dareen caadi ah oo aragti ah. Laakiin waqtigan xaadirka ah, 98%% bogagga internetka iyo guddiyada shaqada hel gacmo-gacmeedka qaabka warbaahinta bulshada ee casriga ah. Inta u dhaxaysa guddiyada shaqooyinka iyo websaydhyada xirfadaha ee UAE shaqooyinka bannaan ee Expo 2020, Dubai waa la kala qaybiyey maalgashigoodii. Asalka kaliya ma jiro hal magaalo oo ku taal Imaaraatka, iskuday raadinta shaqooyinka iyo hage ku sugan Dubai.
Sidaa awgeed, shirkadaha dowladeed ee xiriirka si joogto ah u bixiyaan guddiyada shaqada iyo xulashooyinka shaqo ee UAE. Sida xaqiiqda ah, shaqaaleysiinta shaqaaluhu waxay heli karaan shaqooyinka laga helo halkaa. Dhinaca kale, waxaad ku kordhin kartaa farsamooyinka shaqo raadinta. Isla markaa internetka, waxaad ka heli kartaa boos bannaan oo Dubai ah. Dhammaan shabakadaha internetka oo dhan, waxaan sidoo kale heysanaa tirakoob aad u ballaaran oo ah maareynta websaydhka caalamiga ah ee la xidhiidha shaqooyinka furitaanka. Tusaale ahaan, Garoonka Diyaaradaha Duba ee Boeing 737-800 ama Fiverr.com halkaasoo aad ka heli karto shaqooyinka sawir-gacmeedyada casriga ah ee Dubai.
Dubai Imaatinka Shaqo ee Ugu Fiican ee Imaaraadka - marwalba wax badan ka ogow
Xarumaha Shaqada ee ugu Fiican Bariga Dhexe
Ka raadso shaqo Imaaraadka Carabta iyadoo shirkadda Dubai City. Inkastoo tani ay run tahay waxaanu ka dhacaynaa hay'adaha shaqaaleynta ee ugu fiican online. Sababtan awgeed, waxaan ku caawinnaa shirkadaha ugu fiican ee Emirates sida Monster.com, dhab ahaantii, Bayt.com ama CareerBuilder.com annaga oo nala shaqeynaya. Qodob kale oo muhiim ah oo leh shabakadaha kale ee la-hawlgalayaalkayagu waxay isku midka yihiin nafteena. Waxay sidoo kale xaqiiqda ku caawiyaan inay u hadlaan shaqo ka raadso UAE. Si loo caddeeyo shaqo raadinta shaqadeena aan ku bixinno UAE waa mid ka mid ah adeegyada ugu fiican Dubai. Waqtiga dambe ama ka dib waxaad ogaan doontaa isticmaalka habkii hore ee raadinta xirfad-dhaqameedku u dhici doono.
Si kastaba ha noqotee, ilaa iyo inta aad adeegsanaysid adeegyadayada raadinta adeega waxaad sidoo kale aadi kartaa shaqo raadso Sucuudiga. Laakiin dhinaca kale shaqooyinka Qadar aad ayey u fududahay in la helo. Xaqiiq ahaan wakaalada shaqaaleysiinta iyo guddiyada shaqada ee Qadar waxay leeyihiin waqti xawaare aad u dhakhso badan muddadii musharixiinta Bariga Dhexe. Guud ahaan kahadalka raadinta shaqooyinka Bariga Dhexe badalkeeda kaliya UAE. Ilaa hada raadinta shaqooyinka dhammaan Bariga Dhexe ee 2019 iyo 2020. Ku siinayaa inaad raadiso dhagaysi aad u weyn oo ka mid ah guddiyada shaqaalaynta iyo shaqo bixiyayaasha tooska ah meel fog oo weyn.
Soo ogow cidda shaqaaleysiin doonta ee Dubai
Xafladaha Caalamiga ah ee Shaqada Dubai
Xafladaha ballanqaadka xirfadaha caalamiga ah ayaa inta badan soo jeediya warshado gaar ah. Laakiin maaha in la sheego Xafladaha caalamiga ah ee Dubai waxay gebi ahaanba ka duwan yihiin laga bilaabo Dubai suuqa shaqada. Mid ka mid ah midka ugu fiicani waa UAE Xirfadaha Shaqaalaha xirfadlayaasha caalamiga ah ee u jiheysta jihada xirfadeed ee cusub. Dammaanadda shaqaalahan ayaa had iyo jeer ku xiran shaqeeyaha qaarkood ama Wakiilada qorista ee caalamiga ah.
Ballan-qaadkan shaqo wuxuu caawiyaa muwaadiniinta ka timid UAE. Si aad uga bilowdo shaqooyin cusub London, weliba waxaad ka raadsataa Australia shaqooyinkeeda, yaan la xusin mid ka mid ah haweenka ay jecel yihiin goobaha ay ku badan yihiin Shaqooyinka New Zealand. Mar marna dadka ajnabiga ah waxay awoodi doonaan inay shaqo ka helaan Kanada. Sidaas awgeed mararka qaar madaxda sare ee khibrada leh ayaa sidoo kale raadinaya Shaqooyinka caalamiga ah ee Dubai. Sida iska cad maaha mushaharka laakiin waa khibrad caalami ah. Sababtaas awgeed, Dowladdu waxay abuurtay ogeysiis ganacsi oo gaar ah.
Mashruuc kasta oo dhacdooyin ah, dalxiisayaashu waxay si joogta ah ugu socon doonaan liiska maamulka iyo hay'adda ee u joogi doona goobaha xirfadaha caalamiga ah ee Dubai. Marka la eego qodobbada, waxaad raadineysaa fursadda shaqo ee suuqa Dubai waa inaad sahamisaa shirkad kasta iyo shirkad kasta oo xiiseyneysa xataa xitaa shaqooyinka Sharjah. Sida lagu xusay waa inaad soo qaadataa tiro badan oo manhajka manhajka ah oo ay la socdaan waayo-aragnimo shaqo. Sheekada nolosha iyo natiijada waxay diyaar u tahay inay iska iibiso naftaada shirkadda Dubai. Talooyinkayagu waa adiga Shaqooyinka IT-ga ee Dubai ajnabigas - sababtoo ah nooca shaqo ee bilowga xirfadaha waa sahlan tahay in la helo.
Xafladaha Shaqada ee Dubai waxay noqon kartaa horumar aad uwanaagsan
Markaad aado halkaas iskuday in wax walba loo tixgeliyo si ay xirfad ugu helaan UAE. Ilaa iyo intaad wadahadalada la bilawdo qorista shaqaaluhu waa inaad u tixgelisaa habkaas wareysiga. Wax kastoo hadal fudud ah waxaa laga yaabaa inay qayb ka tahay wareysiga mini. Mid kasta iyo wakiilka qorista ee shaqada South Africa ee Dubai aad u soo dhawaato maalintaas ayaa kuu horseedi karta inaad noqoto mid furfuran xirfaddaada. Waqtiga ugu dambeeya codsadayaasha kale waxaa laga yaabaa inaysan fursad u helin inay ku garaacaan siiba gaar ahaan shaqooyinka Dubai 2019 iyo Abu Dhabi.
Qodob kale oo muhiim ah waa shirkad gaar ah oo caalami ah. Waxaa laga yaaba inay dhici karto xataa isku day inaad soo jeediso xirfad shaqo. Ama kiiskan, waxaad ku samaysaa wareysi goobeed oo ku saabsan adiga oo ah musharax u dhigma shuruudaha. Sida xaqiiqda dhabta ah, waxaynu og nahay in yar yahiin xirfadlayaal shaqo kuwaas oo shaqooyin ka helaya Oman soo jeedin iyo kuwo la mid ah kuwa kale Shaqooyinka Singapore ee caalamka 2016 ganacsiga banaan ee Dubai.
Diiwaangelinta Xirfadaha Shaqooyinka UAE ee Dubai Dubai
Shirkadaha internetka ee Dubai boggooda shaqo ee Dubai
Wadajir oo leh shirkadda Dubai City, waxaad ka heli kartaa sawir maskaxdaada ah loo shaqeeyaha ugu fiican Dubai. Maareeya shirkadda ugu fiican ee Dubai si ay shaqo ugu hesho Philipino iyo sidoo kale shirkadaha kale. Shirkaddeenu waxay ka abuurtay liis ay ku qoran yihiin shirkadaha shaqaalaynta ee Imaaraadka Carabta. Si aad u tilmaanto sababta aadan toos ugu tagin barta. Ka dibna si gaar ah u codso fursado shaqo Dubai qaybta shaqada ee loo shaqeeyo boggooda internetka. Sababtaa awgeed, haddii madaxyahankaaga u furan yahay furitaan qeybtooda shaqo. Waxaa jira doorasho lama filaan ah oo aad adigu shaqo ka raadso Dubai. Isla calaamaddan oo kale, waxaa jira fursado aad u ballaaran oo aad adigu u taagan tahay. Yaa ogtahay inaad xitaa ka heli karto shaqooyinka Sacuudiintiga iyo in loo gudbiyo dhismaha Shaqooyinka Dubai ee 2019.
Si aan u soo koobno ​​dhammaanteen shirkadda Dubai ee qurbaha. Waxaa laga abuuray liiska loo shaqeeyeyaasha tooska ah ee UAE. Si aad u jeceshahay inaad shaqo la bilowdo. Iyo inaad u isticmaasho khibradaada shaqo ee ku saabsan jagada cusub ee UAE. Waxaa jira dhowr shirkadood shaqooyinkooda Wadamada Khaliijka, shaqooyinka injineernimada madaniga ah ee ka jira Dubai 2019, isku soo wada duuboo waxaad xaqiiqdi ku heli doontaa wax faaido kuu leh naftaada.
Shirkadaha Dubai ayaa ka faa'iideysanaya helitaanka shaqo
Haddii aad si hubaal ah u hubineysid inaad ku shaqeyn karto shirkad gaar ah xitaa tusaale ahaan fudud barashada shaqada ee UAE. Markaa dib ha u dhigin mustaqbal mustaqbalka ah oo raadso fursadda shaqo ee siman ee ku habboon khibradaada shaqadaada nolosha. Laakiin waqti isku mid ah, ma haysatid waqti raaxo ah waxaadna u baahan tahay inaad ogaatid sida aad shaqo ku heli lahayd Dubai si aad u booqato fiisada si dhakhso ah oo aad ku bixiso biilasha. Waqti xaadirkan waa inaad dalbataa dhammaan shirkadaha liiska. Dhammaanba mid deg deg ah laakiin tani waxay noqon kartaa mid ku habboon wax qabad la'aan ee habka ugu wanaagsan ee helitaanka shaqo. Goorta waqtiga loo qabsado helitaanka booskaaga cusub shirkadaha ugu qiimaha badan Dubai.
Codsiga u soo dir - Shirkadaha ugu sarreeya ee ka shaqeeya Dubai
Cold Call si loogu shaqeeyo Bariga Dhexe
Ugu dambeyntiina, waxaanu gaarnay wicitaan qabow si loo tixgeliyo shaqada xafiiska Dubai. Markaa waqti ka waqti, waxaan ku fekereynaa inaad aragto oo xiiseynaya liiska shaqo. Si kastaba ha noqotee, fursadani waa ka baxsan tahay. Laakiin waqti isku mid ah, dalabkan shaqo ayaa laga soo dhajiyay shirkad deg deg ah oo ku taal Dubai. Waxaa intaa dheer, aad aad ujecel tahay magdhow mushahar. Oo aad jeclaan lahayd inaad ballaariso super this talooyin xiiso leh. Sida xaqiiqda ah, waxaad u baahan tahay inaad ka bilawdo ka duwanaanta suuqa bannaan ee shaqooyinka online Dubai. Si isku dheelitiran, isku day inaad qaadato talobixin qabow. Dhinaca kale, waxaad u aqoonsan kartaa ururkan inuu yahay isku xirka xidhiidhka oo ay weheliyaan shaqooyinka Bariga Dhexe ee doorashada saxda ah.
Ujeedada ugu dambeysey ee rasmiga ah Xirfadda Dubai ee WhatsApp ee 2019-2020. Guud ahaan, waa inaad bilowdaa inaad ku tababarto xirfadaha iibka taleefanka si aad u hubiso faa'iidadaada. Laakiin tusaale ahaan, haddii aad raadineysid shaqooyin xirfad shaqo oo ku yaala UAE. Uma baahnid email aad u badan si aad ula xiriirto qof shaqsi ah oo ka tirsan ururka aad ka tirsan tahay dir CV-gaaga. Laakiin dhinaca kale, helitaanka faahfaahinta xiriirka meesha ku habboon maamulaha sare ee shirkadda mararka qaarna sheeko ahaan ha noqotee. Markaa waxaad u qodaysaa shabakadda google: jagada banaan ee Dubai ee shaqada ama si cad iskuday inaad wax waydiiso lahadal ugu yaraan soo dhoweynta si aad u tilmaantid gacanta sare saameyn shaqsiyeed.
Shaqooyinka ku yaal Dubai 2019 - Waa maxay sababta loo isticmaalo wakaalad shaqaale?
Aad ayey muhiim u tahay in la garto in saameynta isgaarsiintu ay fure u tahay la xiriir qof shaqsi ah si toos ah. Waa in la xasuusnaadaa in maamulayaasha shaqaalaynta ee hore loo soo sheegay inay leeyihiin shaqooyin banaan oo cajiib ah oo soo socda adiga. Markaad tixraacdo qodobadan, isku kalsoonow markastana ku lifaaq a nuqulka manhajka manhajka iyo buug-gacmeedka. Qaar ka mid ah loo-shaqeeyayaasha ayaa u baahan haddii la sharciyeeyo emails aad dirto.
Waxaad sidoo kale weydiin kartaa macluumaad ku saabsan noocyada kala duwan u guuritaanka xirfad ee Dubai 2019, ama xirfad noocee ah ama tayada ururka uu raadinayo musharax. Maskaxda ku hay in xidhiidhkan noocan ah aan mar walba la helin si fiican, laakiin marwalba waa fursad ay ku siin doonto gudaha waddooyinka bannaanbaxyada soo socda.
Madaxda Hantida iyo Hay'adaha Qorista ee Dubai
Marka hore, waa inaad tixgelisaa qaar Caawinaad xirfadeedka raadintaada shaqo. Ujeeddadan awgeed, ugaadhsadeyaasha ugaarsada iyo shirkadaha shaqaalaynta ayaa shaki la’aan gacan ku siin kara. Barta badanaa la iska indhatiro ayaa ah Meelaha shaqada ee la heli karo ee talooyin ku saabsan shaqooyinka Bariga Dhexe. Si aad uhesho qaab kale oo ka mid ah hay'adaha shaqaalaynta gaarka loo leeyahay waxay la imaan kartaa khidmad lacag ah. Hase yeeshe, qorayaasha dhinaca wanaagsan waxay had iyo jeer abuuraan muuqaal iyo qiyaasaan qiimaha mid kasta shaqaale xirfadlayaal ah ee Dubai. Sababtan awgeed, waxaa jira maamulayaal badan oo matalaya iyo ururrada gaarka loo leeyahay oo aad awoodi kartid inaad soo dejiso resignkaaga.
Si aad u sameysid inaad u baahan tahay inaad saxdo khibraddaada xirfadeed iyo qiimeeynta qiimaha qorista shaqaalaynta. Marka la eego duruufahaas waa in lagu shaqaaleeyaa wakaaladaha shaqaalaynta waxay u diyaargaroobaan habka aad u dheer. Guud ahaan hay'adaha shaqaalaynta ee Dubai oo caawiya ajaanibta shaqeeya. Marka ugu horeysa, sameyso warbixinta mawduucyada ka dibna wareysiinta musharixiinta. Iyo muddada dheer, in la dhigo musharaxiinta. Waxay qaadan doontaa wakhti sababtoo ah waxay ka caawineysaa inay si fudud ula macaamilaan shirkadda shaqaaleynta. Madax-madax-ka-qaadayaasha UAE la kulan shaqsiyaadka shaqo doonka ah adigoo isku dayaya si loo helo dabeecad gaar ah.
Adeegyada gargaarka shaqada ee Dubai
Marka la eego qodobadaas wakiilka qorista ee Dubai iyo Abu Dhabi isku dayaya si loo buuxiyo boos banaan oo ay bixiso maamulaha HR gudahood shirkad gaar ah. Si kastaba ha noqotee si aad boos ugu hesho shaqo doon ma aha wax fudud in la sameeyo. In kasta oo qof uu shaqaaleysiiyay shaqaale u shaqeysta. Waa muhiim in la garto in mushaarka badanaa lagu bixiyo komishanka. Marka si loo tilmaamo ugaadhsiga Madaxa ballan qaadku waa inuu kugu meeleeyo ASAP.
Dhinaca wanaagsan ka fikir maskaxda ku haysa in dhismayaal dugsiyo badan, machadyo, iyo jaamacado ku yaal UAE. Dhab ahaantii, qaar badan oo ka mid ah ayaa leh adeegyada xirfadaha shaqada iyo shaqada. Iyo hal shay, waxay si weyn u caawinayaan qalin jabiyaasha cusub si ay u bilaabaan bilaabahooda nooc la aqbali karo. Dhanka taban shaqaaleynta, takhasusayasha caawimaan hal arday iyo ardayda kale iyo ardayda jaamacadeed ee haysta baaritaankooda shaqo ee Imaaraadka Carabta. Sidaas waxaad ku aragtaa riyadan shaqooyinka shirkadaha Dubai 2019.
Isku-diiwaangalinta hay'adaha shaqaalaynta ee ugu sarreeya ee UAE
Shaqo ku meel-gaar ah ama Tababarka
Laga bilaabo mudo ilaa waqti ku meel gaar ah fursadaha shaqada waxay noqon kartaa jihada wanaagsan ee boosaska joogtada ah ee joogtada ah. Intaa waxaa dheer, haddii lagaa tagay warshadaha helitaanka shaqo ku meel gaar ah leh shirkad kasta oo sumcad leh waa a habka ugu fiican ee loo helo bilawga xirfadaha ee Pakistan. Dubai City Shirkadda waxay ku siineysaa xiriiro ganacsi oo faa'iido leh si aad u wacdo natiijada mustaqbalka. Hay'adaha isdiiwaangelinta ee aan la tirin karin waxay kaa caawin karaan helitaanka jagooyinka ku meel gaarka ah ama kuwa caadiga ah iyo shaqada qandaraaska ee Imaaraadka.
Internships waa wax badan doorashada ardayda dhigata shahaadada koowaad gudaha Imaaraadka. Dhab ahaantii, su'aasha laga hadlayo qalinjabinta arday dhigta kulliyad ma tahay mid mudan in la tababarto? Xaqiiq ahaan, waxaa xaqiiqo ah in ay mudan tahay in la kordhin khibrad cusub ee Bariga Dhexe boos kasta. Iyo iskuulo joogto ah iyo adeegyo meeleyn shaqo oo gaar loo leeyahay sida ku meel gaadh ah shaqada iyo degenaanshaha Dubai Shirkaduhu waxay ku xirmi karaan shahaadada koorsooyinka.
Dhanka kale, waa inaad qaadaa talaabo horay loo qaaday taasina sidookale waxay noqon doontaa wadada ugu wanaagsan ee lagu helo shaqo Magaalada Dubai. Isla mar ahaantaana, waad bilaabi kartaa shaqada wakhti kasta oo keliya sidii aad ku heli lahayd isku xirnaan warshadeed qaali ah. Dhanka kale talo dheeri ah, waa inaad iska hubisaa isku day inaad friyadiinna Shaqaalaynta Dubai 2019.
Shaqooyinka Dubai Dubai 2019 oo isku dayaya hab gaar ah
Si aad u dhigto suuqa kala duwan ee suuqa shaqadu waa meel tartan ah oo loogu talagalay qof shaqo doon ah. Qaar ka mid ah dadka shaqo doonka ah ayaa ka faa'iideysanaya habab badan oo hal abuur leh oo loogu talagalay qabashada dareenka loo shaqeeyayaasha Dubai ee loogu talagalay Hindiya. Qodob kale oo muhiim ah waa gudiyada xayeysiinta iyo qorista. Sidaa darteed natiijada waraaqaha horumarka ah ee nuqul ka mid ah manhajka manhajka iyo biography waa in lagu lifaaqaa.
Dib-u-sii-qaybinta, xaaladahaas, aad ayuu muhiim u noqonayaa. Sababtaas awgeed, dadka qaarkiis xitaa London waxay abuureen dhowr nooc oo resume ah. Si aad naftaada u baratid dadweynaha guud oo aad ugu lugeeysid magaalada London sidii baal aadamiga ah. Sida aan kor ku soo aragnay, waa qaar ka mid ah farsamooyinka shaqsiyaadka ay u gudbeen si ay u xusuusiyaan shaqo-bixiyeyaasha jooga Dubai.
Intaa waxaa sii dheer, isku mid ma ahan qaababkan runti waa awoodaan kaa caawin doonaa inaad bilowdo shaqada qoyskaaga ee Imaaraadka Carabta. Sidoo kale, fiiro u yeelo markaad raadineyso shaqo caalami ah. Waad qaadan kartaa tixgelinta shaqaaleysiinta xitaa xitaa waxaa weheliya shaqooyinka bangiyada ay bixiyaan Qatar ama Sacuudi Carabiya. Laakiin dhanka kale, waxaad sidoo kale u gudbin kartaa macluumaadka khaldan.
In kasta oo ugaadhsadeyaashu ay shaqo raadis yihiin U shaqeynta si loogu isticmaalo farsamooyinka hal abuurka qaab kasta oo la heli karo. Isla astaantii, waxaad isku dayi doontaa inaad ka soo baxdo dad badan oo shaqo doon ah oo ku sugan Dubai iyo codsadayaal kale. Iyada oo tan maskaxda lagu hayo hubi inaad haysato macluumaadka ku habboon ee warshadaha. Sababta oo ah waxaad had iyo jeer ku jiri kartaa rajada aad ka heli doonto farxad Fursadda Cusub ee Xirfadda. Iyo inaanad sheegin inaad isku dayayso raadso talobixin shaqo oo aad u fiican boggayaga.
Ha kormeere kuwa kale habab aad u ballaadhan oo si balaadhan u furtay fursaddaada shaqo ee Dubai.
Khadka Bottom for Career ee Dubai 2019
Waxay u dhigantaa shaqooyinka Dubai 2019 iyo 2020. Noqo suuq shaqo oo Bariga Dhexe oo casri ah noqo himilo sare iyo waajib si buuxda uga qaybqaadashada. Dhanka kale, ma jiro dammaanad qaad ama dammaanad qaad si loo helo fursado shaqo oo aad u fiican. Shahaadooyinka iyo shahaadooyinka xirfadeed waxay badanaa ku xiran yihiin isku-dar ah hababka raadinta xirfadaha. Wax dhib ah ma lahan waxa ku dhacaya noloshaada shaqo raadinta ee UAE hab gaar ah wakhti kasta. Si taxaddar leh u ilaali fikradaha in siyaabaha waxtarka leh ay yihiin habab kala duwan. Markalena waxaa jira goobo badan oo shaqo oo laga heli karo Dubai si aad u hesho macluumaad ku saabsan Dubai.
Xaqiiq ahaan, marka lagu daro qiimeynta ugu sareysa ee ugu sareysa irdaha shaqada ee Imaaraadka, sidoo kale waxaa jira dad yar. Dhammaantood waxay leeyihiin awoodooda iyo daciifintooda xitaa inkastoo qofka ugu fiican uusan ku caawin karin. Laakiin si ay u tilmaamaan dhinaca wanaagsan waa inaan la qabsanin tijaabin a farsamooyin kala duwan ee raadinta xirfad cusub ee Dubai.
Guud ahaan marka la hadlayo, Internetku waa furaha shaqooyinka Google & Xirfadaha Microsoft. Falanqaynta ugu dambeysa, noqo qalabka ugu fiican ee loogu talagalay dadka shaqo doonka ah ee magaalada Dubai.